I-jacquard sweatshi yomvelisi wase China mveliso kunye nabenzi | WG
Uhlobo: Intamo yesikhephe esine-jacquard knitwear yabasetyhini
Inkqubo: I-7GG ijacquard yamacala amabini
Phawu: Imfutshane kwaye intle, inesitayile, inomdla
I-WG: isiqwenga se-1 ngombala ngamnye we-MOQ, ungazama ukwenza iimpahla ezinithiweyo kwibhetshi encinci, ukuphinda uhlele kwakhona kuxhomekeke kwintengiso. Ukuhanjiswa kweentsuku ezingama-5-7 zomsebenzi, ukunciphisa umngcipheko kubuncinci.
Abanye: Uxanduva olungephi lwenkonzo yasemva kwenkonzo, akukho sabelo, ubuninzi be-MOQ.
I-WG: iminyaka eli-15 yamava e-OEM, uphando kunye nophuhliso, ukuthatha izinto zefashoni kwimarike ngexesha. Ukufunyanwa kwesitayile seWG yoyilo, ngokulawula isimbo saseYurophu nesaseMelika, isitayile senoveli ezingama-50 sinokufumaneka ngexesha ngalinye.
Abanye: Akukho uyilo, ukulungiswa kwesampulu kuphela. Akukho sitayile sakho, akukho sitokhwe.
WG: Iifektri ezizezakho; Ngama-26 oomatshini bolawulo lwamanani bekhompyuter abangeniswayo, malunga nabasebenzi abali-100 abazinzileyo nabanezakhono; Ebubanzini beempahla ezinithiweyo, i-1.5gg inokufumaneka, kunye nokubhitya kwe-16gg; Iziphumo zenyanga: iziqwenga eziyi-100,000; Isiqwenga se-1 se-MOQ, ixesha lokuthatha iisampulu kwiintsuku ezingama-2-3 zokusebenza, ixesha lokuhanjiswa kweentsuku ezingama-5-7 zokusebenza, ukuhanjiswa kweentsuku ezi-3 zokuphinda usebenze.
Abanye: Oomatshini bokulawula amanani ekhompyutheni basekhaya, abancinci abangeniswa kwamanye amazwe; Abasebenzi abaninzi bethutyana baqeshwe ukuze bafumane ukuhanjiswa; MOQ iziqwenga ezingama-200-300; ubuncinci iintsuku ezintlanu zokwenza isampulu; Ixesha lokuhambisa i-15-30 yeentsuku, iintsuku ezili-10 zokuphinda u-odole.
I-WG: iminyaka eli-15 esemgangathweni wokuthumela ngaphandle kumgangatho waseJamani naseJapan; ukuhlolwa kwemigangatho emininzi kunye nokuvavanywa kuphunyezwa ngokungqongqo; Izinga lokubuya zero kwiimveliso ze-OEM.
Abanye: Ubungakanani obukhulu kunye nokuhanjiswa kwezinto ngobuninzi zixhalabile ngaphezulu komgangatho weemveliso ze-OEM.
I-WG: Inkonzo yokumisa enye yoku-odola, ukuvelisa kunye nokuthengisa, ke ixabiso langaphambili lomsebenzi linokuqinisekiswa kungekho msantsa phakathi kweqela lesithathu.
Abanye: Imizi-mveliso emincinci, amaxabiso aphezulu ngenxa yokunxibelelana okuphakathi.
I-WG: Ukusuka kwisampulu ukuya kuthumelo, inkonzo nganye-nganye-ngokulandelelana komlandeli-up ukuqinisekisa ubungakanani bemveliso kunye neshedyuli yokuthumela.
Abanye: Akukho kulandelwa ngokusisigxina, okanye omnye umsebenzi wokulandela iiodolo ngaphezulu kwabathengi ababini.
Egqithileyo I-cardigan yefashoni yabasetyhini
Okulandelayo: I-Ladies 'intambo ejikelezayo yentamo evulekile
Iipateni zokubopha ijezi Pullover zamadoda.
Ladies ezinithiweyo Tassel pullover kwindawo ephakathi kunye ne ...